Iiraan oo Warqadda Xiritaanka u jartay Hogamiye Donald…
Xukumadda Iiraan ayaa Booliiska Caalamiga ah ee Interpol weydiisatay in ay usoo xirto Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo tobaneeno ruux oo kale oo wax ka ogaa dilka Janankii looga dilay Magaalada Baqdaad ee Caasimadda Dalka Ciraaq.
Tahraan waxa ay gucaneysaa dilkii hoggaamiyloo geystay Janaral Qassim Suleymaani oo dhacay 3-dii Janaayo 2020-ka, kaas oo wax ka badalay socdaalka mas’uuliyiinta Xukuumadda Iiraan oo walwal beegsi ah ka muujiyay Mareykanka.
Iiraan waxa ay ku eedeysay Mareykanka dambiile galay fal aan mudneen in aan looga daba harin, sidaas awgeed Booliiska Caalamiga ah ay waajib ku tahay in ay gacanta kusoo dhigaan dambiilayaal sharciga la horgeynayo.
Booliiska Caalamiga ah ee Interpol oo saldhigiisu yahay Magaalada Lyon ee Dalka Faransiiska ayaa loo diray Warqadda xiritaanka ah ee loo jaray Trump, cidda laga doonayo in ay soo qabo una gacangeliso Xukuumadda Tahraan ay tahay hay’addaan.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Iiraan Cali Alqasimehr ayaa sheegay in Trump iyo Tobaneeno kale ay ku eedeysan yihiin ku lug lahaanta weerarkii lagu dilay Jeneraal Qaasim Suleymaani ee ka dhacay Ciraaq.
Wakaaladda Wararka ee ISNA oo war ka qortay xogta sheekeedaan ayaa shaacisay in xitaa haddii waayahaan la qaban waayo Trump la beegsan doono kolka uu xilka ka dego, taasina aan looga hari doonin.
Waa kuma Gen Qaasim Suleymaani?
Xukumadda Iiraan ayaa safarrada ka mamnuucday Madaxda dalkaas, kadib markii ay heleen xog ku saabsan in ay bartilmaameed u yihiin Cadawgooda Mareykanka oo tusaale muuqda u ah Janaral Qaasim.
Iiraan ayaa kolkii la aasayay Jananka waxa ay ku hanjabtay in mar uun indhaha Mareykanka ka daadan doonto ilin ka daran ka timid dadka Iiraan, waxaana layaab iyo fajac noqday sida xiligaan loo xiri karo Madaxweynaha Mareykanka.
Suuragal ma tahay in Booliiska Caalamiga ah ee Interpol gacan ka geystaan qabashada Hogamiye Trump oo ah nin ay aad u ilaaliyaan Askarta Mareykanka iyo muwaadiniinta heysata dhalashada dalkaas?
Isha:- ISNA / Aljazeera / Axadle.
axadle 3013 posts